Home Wararka Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo qaadacay in uu la kulmo Farmaajo, soona...
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo qaadacay in uu la kulmo Farmaajo, soona diray MW K/X kiisa
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ahayd in uu ka qayb galo kulanka logu yeeray Africa Conference Now, iyada oo maalinta labaaad ee wafuudu ay joogto halkaas shir gaar ah loo qabto Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo.
Sida ay sheegtay Madaxtooyada dalka Kenya, waxaa shirka uga qaybgalaya dalka Kenya Madaxweyne Ku xigeenka William Ruto iyada oo MW Uhuru ka gaabsaday la kulanka Farmaajo. Shirkii gaarka ahaa ee loogu magac daray “Special Summit” oo sida gaarka loogu qaban lahaa Soomaaliya iyo Kenya waa la baajiyay.
Talabaadaan oo ay qaaday dowlada Kenya ayaa timid ka dib markii Farmaajo muujiyay in uusan wali haynin jawaabtii uu balan qaaday in uu la imaan doono shirkaas. Waxaa la soo sheegayaa in Madaxweyne Yuwere Musaveni uu aad uga xumaaday fashilka ku yimid shirkii uu waqtiga badan uu galiyay qaban-qaabadiisa isla markaasna uu qabsoomi doonin.